काठमाडौंमा ‘स्मार्ट लकडाउन’ सम्बन्धी नयाँ आदेश जारी : के-के गर्न पाइन्छ ? - माइपोखरी न्युज
Home MAIPOKHARI NEWS काठमाडौंमा ‘स्मार्ट लकडाउन’ सम्बन्धी नयाँ आदेश जारी : के-के गर्न पाइन्छ ?
काठमाडौंमा ‘स्मार्ट लकडाउन’ सम्बन्धी नयाँ आदेश जारी : के-के गर्न पाइन्छ ?
काठमाडौं ४ माघ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उपत्यकामा ‘स्मार्ट लकडाउन’ सम्बन्धी नयाँ आदेश जारी गरेको छ । दैनिक रुपमा कोरोना संक्रमितको संख्या झन् बढ्दै गएपछि काठमडाैंसँगै उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मंगलबार मध्यरातदेखि लागू हुने गरी माघ मसान्तसम्म आमसभा, जुलुस, सभा, भेलालगायतका गतिविधि गर्न रोक लगाएको छ ।